ဖျားနာဆေးခန်းတွေကနေ အနံ့ပျောက်လူနာတွေကို ပြန်လွှတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြီ – Ever Best
By Ever BestPosted on September 27, 2020
ဖြားနာဆေးခနျးတှကေနေ အနံ့ပြောကျလူနာတှကေို ပွနျလှှတျရတဲ့ အကွောငျးရငျး ဆရာဝနျ ကိုယျတိုငျ ရှငျးပွီ
လေး စား အပျပါသော….. အမတျမငျးမြား ခမြာ….
Fever Clinic မှာ အနံ့ပြောကျလူနာတှေ ပွနျလှှတျနရေတယျ ဆိုတာ တဈကယျပါ…. အမတျမငျးတို့ မသိကွသေးလို့ပါ…. ဒီတိုငျး လူနာကို သခြောရှငျးပွပွီး… ပွနျလှှတျနတေဲ့…..ဖြားနာကုဆေးခနျးတှရှေိပါတယျ…. အနံ့ပြောကျရငျ အိမျပွနျ……..အိမျမှာနေ… Mask တပျထား… နောကျရကျ လူနာတငျကားနဲ့ လာခေါျ… Swab ယူပေး… အဲ့လို လုပျနရေတာ ကွာပါပွီ ခမြာ
ဘယျတုနျး ကတညျးကလဲ ဆိုရငျ….. ဆေးရုံမှာ….လူနာတှေ ပွည့ျကုနျကတညျးက ပါ… Q centre တှေ…. နဲ့ ဆေးရုံအသဈတှေ မဖှင့ျခငျ စပျကွားမှာပါ… အငျးစိနျမှာ Swab ယူ ဖို့…..ရကျခြိနျးတှေ ဘယျရကျအထိ ပွည့ျကုနျပွီဆိုတဲ့ နေ့ရကျတှကေို သတိရမယျထငျပါတယျ…. အဲ့အခြိနျက စပါတယျ….
အဲ့ နညျးဗြူဟာကို အပေါျက မကွိုကျပါဘူး ဒါပမေယ့ျ Q centre တှေ ဆေးရုံတှေ မှာ… နရောမဆန့ျတဲ့အတှကျ…မွပွေငျ က အဆငျပွသေလို လုပျနကွေတာကို… မသိခငြျယောငျဆောငျပေးထားကွပါတယျ…. .အဲ့နောကျပိုငျး Q centre တှေ Guideline တှေ….ပွငျပါတယျ. ဆေးရုံ တှေ ခြဲ့ပါတယျ… နညျးနညျး ပွလေညျသှားပါတယျ…. ဒါပမေယ့ျ အနံ့ပြောကျလူနာတှေ အရမျးအားမြားလာပွီး.. NHL ရဲ့ စဈနှုနျးကို ကြောျလှနျလာတဲ့အခါ.. နောကျတဈခါ ဒီအတိုငျးပွနျလညျပါတယျ.
အဲ့အထိ အမတျမငျးမြား…သိပျမသိကွသေးပါ… အုပျခြုပျရေးမှာ အပေါျပိုငျးလောကျကသာ… သိပါတယျ…. အခု ပွောတဲ့ အောကျက Case လောကျသာ… အမတျမငျးတို့ Level နဲ့ သိကွမှာပါ…. အမတျမငျးမြား သိအောငျ… ပွသနာ အနညျးငယျ ရှိတဲ့ ကိစ်စလေးတှေ… ပွောပွပါမယျ…
စစခွငျး ဖွဈတာ….မွောကျဥက်ကလာပါ…. မွောကျဥက်ကလာ Fever Clinicက အနံ့ပြောကျလူနာ ပွနျလှှတျတာကို…. အုပျခြုပျရေးပိုငျးက သိသှားပါတယျ… သိတော့ Complaint တကျပါတယျ… အဲ့ ခြိနျက ရိုးမ ဆေးရုံ စRun ဖို့ လုပျနခြေိနျထငျပါတယျ…… ဖွဈစဉျမှာ …အဆင့ျဆင့ျ ခေါငျးမခံ ပဲ… မရှငျးပွပဲ… ပွနျလှှတျတဲ့ ဆရာဝနျ ခေါငျးခံ လိုကျရပါတယျ
ရလဒျက မွောကျဥက်ကလာ Fever clinic ပိတျပါတယျ.. အဲ့တာရဲ့ အကြိုးဆကျက… မွောကျဥက်ကလာ ဆေးရုံ ကို ဖြားနာကု လူနာတှေ.. အမြားကွီး တိုကျရိုကျ ဝငျပါတယျ… အရှေ့က ကာထားတဲ့ Fever Clinic တံတိုငျးမရှိလို့ပါ… အဲ့လို ပွနျလှှတျ နရေပါတယျ ဆိုတာကို…. အလယျ Level က သိတာ… ဆေးခနျး နှဈခုမွောကျ….မှပါ…. အဲ့တော့မှ မကြျကလဲဆနျပွာ ဖွဈကုနျကွတာပါ…. အဲ့အရငျ ပွောခဲ့…ကွပါတယျ… သိပျမ လှုပျခဲ့ ကွပါ… အလုပျရှုပျနတောလဲ ပါပါလိမ့ျမယျ….. ခုကွတော့မှ အသံထှကျတဲ့ ဆရာဝနျတှကေို… လိုကျ ဖိပွောနကွေတာ… သဘာဝ မကပြါ….
ငါတို့ ကို ပွောရငျ ငါတို့ လုပျပေးမှာပေါ့… ဆိုတာမြိုး ပွောခဲ့ရငျ…. အဲ့အသံတှေ စထှကျလာတုနျးက… ဘာလို့ နားထဲ မဝငျသလဲဆိုတာ.. အသံလာရာ…လမျးကွောငျးကို ပွနျကွည့ျဖို့ လိုပါလိမ့ျမယျ…ထငျပါတယျ…. အားလုံး ပူးပေါငျး လုပျမှ…. အဆငျပွမေယ့ျအခြိနျပါ…. Fever Clinic က ဆရာဝနျတှကေို… ပွဈတငျပွောဆိုတာ…. မဖွဈသင့ျပါ… လကျရှိမှာ….အရှေ့အရမျးရောကျနတေဲ့…. ကာကငျးတှပေါ…. သူတို့ဆီက အသံတှေ ကွောင့ျသာ… အပေါျက သိပွီး.. Guide Line တှေ…ပွငျလာတာပါ…
အားလုံးကောငျးပါသညျ ဘုရား လုပျနရေငျ… ရစေကျခမြှ သာဓုခေါျပါ…
လေး စား အပ်ပါသော….. အမတ်မင်းများ ခမျာ….
Fever Clinic မှာ အ နံ့ပျောက်လူနာတွေ ပြန်လွှတ်နေရတယ် ဆိုတာ တစကယ်ပါ…. အမတ်မင်းတို့ မသိကြသေးလို့ပါ…. ဒီတိုင်း လူနာကို သေချာရှင်းပြ ပြီး… ပြန်လွှတ်နေတဲ့…..ဖျားနာကုဆေးခန်း တွေ ရှိပါတယ်…. အနံ့ပျောက်ရင် အိမ်ပြန်……..အိမ်မှာနေ… Mask တပ်ထား… နောက်ရက် လူနာတင်ကားနဲ့ လာခေါ်… Swab ယူပေး… အဲ့လို လုပ်နေရတာ ကြာပါပြီ ခမျာ…..
ဘယ်တုန်း ကတည်းကလဲ ဆိုရင်….. ဆေးရုံမှာ….လူနာတွေ ပြည့်ကုန်ကတည်းက ပါ… Q centre တွေ…. နဲ့ ဆေးရုံ အသစ်တွေ မဖွင့်ခင် စပ်ကြားမှာပါ… အင်းစိန်မှာ Swab ယူ ဖို့…..ရက်ချိန်းတွေ ဘယ်ရက်အထိ ပြည့်ကုန်ပြီဆိုတဲ့ နေ့ရက်တွေကို သတိရမယ် ထင်ပါတယ်…. အဲ့အချိန်က စပါတယ်….
အဲ့ နည်းဗျူဟာကို အပေါ်က မကြိုက်ပါဘူး…. ဒါပေမယ့် Q centre တွေ ဆေးရုံ တွေ မှာ… နေရာ မဆန့်တဲ့အတွက်…မြေ ပြင် က အဆင်ပြေသလို လုပ်နေကြတာကို… မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးထားကြပါတယ်…. .အဲ့နောက်ပိုင်း Q centre တွေ Guideline တွေ….ပြင်ပါတယ်. ဆေးရုံ တွေ ချဲ့ပါတယ်… နည်းနည်း ပြေလည်သွားပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အနံ့ပျောက်လူနာတွေ တစ်အားများလာပြီး.. NHL ရဲ့ စစ်နှုန်းကို ကျော်လွန်လာတဲ့အခါ.. နောက်တစ်ခါ ဒီအတိုင်းပြန်လည်ပါတယ်..
စစခြင်း ဖြစ်တာ….မြောက်ဥက္ကလာပါ…. မြောက်ဥက္ကလာ Fever Clinicက အနံ့ပျောက်လူနာ ပြန်လွှတ်တာကို…. အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက သိသွားပါတယ်… သိတော့ Complaint တက်ပါတယ်… အဲ့ ချိန်က ရိုးမ ဆေးရုံ စRun ဖို့ လုပ်နေချိန်ထင်ပါတယ်…… ဖြစ်စဉ်မှာ …အဆင့်ဆင့် ခေါင်းမခံ ပဲ… မရှင်းပြပဲ… ပြန်လွှတ်တဲ့ ဆရာဝန် ခေါင်းခံ လိုက်ရပါတယ်..
ငါတို့ ကို ပြောရင် ငါတို့ လုပ်ပေးမှာပေါ့… ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ရင်…. အဲ့အသံတွေ စထွက်လာတုန်းက… ဘာလို့ နားထဲ မဝင်သလဲဆိုတာ.. အသံလာရာ…လမ်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်…ထင်ပါတယ်…. အားလုံး ပူးပေါင်း လုပ်မှ…. အဆင်ပြေမယ့်အချိန်ပါ…. Fever Clinic က ဆရာဝန်တွေကို… ပြစ်တင်ပြောဆိုတာ…. မဖြစ်သင့်ပါ… လက်ရှိမှာ….အရှေ့အရမ်းရောက်နေတဲ့…. ကာကင်းတွေပါ…. သူတို့ဆီက အသံတွေ ကြောင့်သာ… အပေါ်က သိပြီး.. Guide Line တွေ…ပြင်လာတာပါ…
Previous post အခုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ သိန်း(၃၀၀၀)ကျော်တန် အိမ်လေးကို အလုပ်တွေ ကြိုးစားပြီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်
Next post ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ အလှတရားတွေပဲ သူမမှာ ရှိတာပါ ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်